लकडाउनमा समय कसरी बिताउँने, रामपुरका महिलाहरुबाट सिक्ने कि ? – Palpa Samachar
लकडाउनमा समय कसरी बिताउँने, रामपुरका महिलाहरुबाट सिक्ने कि ?
By palpa samachar	 On Apr 10, 2020
विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई फैलिन नदिन घरमै बसेर सिलाई बुनाई गरि आय आर्जन बढाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण रामपुरका महिलाहरुले दिएका छन् ।
महिलाहरुले विभिन्न रङ्गीन कागज, धागो तथा खाली प्लाष्टिकका बोत्तललाई प्रयोग गर्दै गमला, झुल्लर बनाउने, स्वीटर,कुसन ,चकटी, डोरमेट बुन्ने, चुरामा बुटिक भर्ने, रुमाल ,मास्क बुन्ने सिलाई कटाईका काम गर्दै आएका छन् ।
रामपुर नगरपालिका ५ विन्दु श्रेष्ठले अहिले सम्म सुइटर आउटर बुन्ने र समय विताउने गरेको बताइन् । उनले लकडाउनका बेला आफू सुरक्षित हुदै घरमै बुनाईको काम गर्दै आएकी छन् । यो सँगै घरको छतमा तरकारी रोप्न, विभिन्न थरिका अचार बनाउने काम पनि विन्दुले गर्छिन् । उनीजस्तै जस्ता दर्जन बढि महिलाहरु यतिवेला यसक्षेत्रमा यस्तै सिप आफैं सिक्ने र केहिले आफूले सिकेका सिपलाई विकास गर्नमा व्यस्त छन् ।
रामपुरकै मनकुमारी थापा मश्राङ्गीले इन्टरनेटको माध्यामबाटै सिप सिकेर, विभिन्न थरि गुडिया बनाउंदै आएकी छन् । मोवाइलमा नचाहिने कुरा हेर्ने, खाली समय सुतेर विताउनुभन्दा घरमा खाली बसेका वेला गुडिया बनाउने, झुल्लर लगाएतका समाग्री तयार गरेर कोठा सजाउने गरेको मश्राङ्गीको भनाई छ । उनले घरकै करिव एक रोपनी जग्गामा नियमित मौसमी तथा वेमौसमी तरकारी समेत उत्पादन गरि बिक्री गर्छिन् ।
सिप सिकेका महिलाहरु त्यहि सिपलाई विकास गर्न सके बजारमा माग हुने समान परिपुर्ति गर्न सहज हुने हुदाँ पनि आफूले खाली रहेको समयमा यस्ता सिप सिके यस्ता माहामारीको अवस्था हटेपछि बजारमा विक्रि गर्न सकिने बताउँछन् । रामपुर नगरपालिकाका धेरै महिलाहरु, मुडा बुन्ने, ढाकाको कपडाबाट पर्स, झोला, पछ्यौरा लगायतका समान समेत बनाउने गरेका छन् । यसरी वुनेका समाग्रीलाई आफन्तलाई चिनोका रुपमा प्रदान गर्न, अर्डर अनुसार पनि बुन्ने गरेका छन् ।
सामुहिक रुपमा काम गर्न नहुने र घरको कोठामै वसेर काम गर्दा सहज नै अनुभव रहेको महिलाहरुको भनाई छ । आजभोली बालबालिकाहरु टेलिभिजन, तथा मोवाइलमा भुल्ने हुदाँ उनीहरुलाई कोरोनाको बारेमा सचेतना बढाउदै इन्टरनेटका माध्यामबाट कागजका समाग्री बनाउन उत्प्रेरित गर्न सके झन राम्रो हुनेछ ।
रामपुरमै विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षिका लक्ष्मि थापाले खेर गएका कागज, झोला, तथा कागजहरुलाई मिलाएर गमला, फुल लगायतका सुन्दर आकृतिहरु तयार गर्न छोराछोरीलाई सिकाएर दिन विताउने गरेको बताइन् । यसो गर्दा विद्यालय जान नपाएपनि घरमै सिपको विकास हुने र जतिवेला पनि सुन्ने र हेर्ने गरिएका नकारात्मक कुराहरु उनीहरुको मानसिकताबाट हट्ने उनले बताइन् ।
रामपुरको रामतुलसी माध्यामिक विद्यालयमा अध्ययनरत पुजा मानन्धर पनि यतिवेला घरमै वसेर युटुवबाट सिप सिकेर कागजबाट बनाएका फूलले कोठा सजाउन ब्यस्त छन् । बेला बेलामा भएका तालिममा सिकेका सिपबाट तयार गरिएका समाग्री पछि बजारमा विक्रि गर्न समेत सकिने हुदाँ महिलाहरुको दिनचर्या नै यसमै वितेको छ । समुहमा बस्दा कोरोनाको संक्रमण फैलिन सक्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै एक्लै घरमै सिपलाई प्रयोग गर्दा धेरै समाग्री तयार हुने गरेको महिलाहरुकै अनुभव छ ।
पाल्पामा क्वारेन्टाइनमा रहेका ४४ जनामै कोरोना देखिएन
पाल्पामा पहिलो चरणको राहत बितरण कार्य सकियो, छुटेकालाई दोस्रो चरणमा समेटिने